Rikoorradii laga diiwaan geliyey wajiga horyaalka heerka koowaad ee Soomaaliya oo la soo gabagabeeyey – Gool FM
Rikoorradii laga diiwaan geliyey wajiga horyaalka heerka koowaad ee Soomaaliya oo la soo gabagabeeyey
Haaruun April 13, 2019
(Muqdisho) 13 Abriil 2019. Waxaa la soo gabagabeeyey wajiga hore ee horyaalka heerka koowaad ee Soomaaliya, haddaba waxaan idinla wadaagi doonnaa waxyaabihii laga diiwaan geliyey qeybtiisii hore.
Arbacadii la soo dhaafay ayaa lagu soo xiray wajiga hore ee horyaalka Soomaaliya garoonka Koonis degmada C.casiis ee gobolka Banaadir waxaana lagu soo gabagabeeyey labada kooxood ee Elman iyo Midnimo.
Kooxda Midnimo ayaana guul 2-1 oo ay ka gaartay Elman ku soo gabagabeysay wajiga hore ee horyaalka Soomaaliya.
Haddaba waxaan halkaan hoose idinkugu soo gubinaynaa rikoorradii laga diiwan geliyey wajiga hore ee horyaalka Soomaaliya oo la soo gabagabeeyey:-
>- Kaarkii Jaallaha ee ugu horreeyey horyaalka xilli ciyaareedkan waxaa qaatay ciyaaryahan Xuseen Dabaasa oo ka tirsan kooxda Gaadiidka kulankii furitaanka horyaalka oo ay la dheeleen Dekedda.
>- Kaarkii casaanka ahaa ee ugu horreeyey horyaalka xilli ciyaareedkan waxaa qaatay ciyaaryahan Farxaan Duqoow oo ka tirsan kooxda Horseed ciyaar ay la dheeleen naadiga Elman oo ku dhammaatay barbaro 0-0, taasoo dhacday 13/02/2019.
>- Goolkii ugu horreeyey horyaalka waxaa dhaliyey Keynaan Siciid Tahliil (KK) oo ka tirsan kooxda Gaadiidka, waxaana uu ka dhaliyey kooxda Dekedda kulankii furitaanka horyaalka oo la ciyaaray 07/02/2019.
>- Rigooradii ugu horreysay horyaalka waxaa loo dhigay ciyaaryahan Maxamed Shaarkeey oo ka tirsan kooxda Jeenyo kulan ay la ciyaareen Dekedda, laakiin nasiib darro waa laga qabtay, ciyaartaas ayaana ku dhammaatay 8-2 ay ku adkaatay Dekedda.
>- Kooxda uu hoggaamiyo macallin Xuseen Mblango ee Muqdisho City ayaa weli ku dhibban inay guul ka gaarto naadiga Dekedda, iyadoo la garaacay kulankii 11-aad oo xiriir ah tartammada oo dhan, kulankii ugu dambeeyey ayaana looga badiyey 1-0.
>- Gooldhalinta horyaalka waa la isku haystaa xilli ciyaareedkan oo waxaa iskula dheggan labada ciyaaryahan ee kala ah; Anwar Sayid Cali Shukuunda oo u dheela kooxda Elman iyo Marcell oo u dhashay Kenya kana tirsan kooxda Muqdisho City.
>- Kooxda difaacanaysa horyaalka Soomaaliya ee Dekedda ayaa wajiga hore ee horyaalka laga adkaaday hal kulan, iyadoo la xusuusto in hal kulan oo kaliya laga adkaaday guud ahaan horyaalkii ay qaaday xilli ciyaareedkii hore, waxaana ay barbareyn kartaa rikoorkeedii hore haddii aan laga badin wajiga labaad ee horyaalka xilli ciyaareedkan.
>- Macallin Yuu Cali oo hoggaamiya kooxda Dekedda ayaa noqday macallinkii ugu horreeyey ee tarabuunka la saaro xilli ciyaareedkan horyaalka Soomaaliya.
>- Xasan Baari ayaa noqday garsooraha ugu dhex-dhexaadinta badan wajiga hore ee horyaalka, isagoo dhex-dhexaadiyey sagaal kulan.
>- Xasan Kaafi ayaa noqday garsooraha kaliya wajiga hore ee horyaalka ee kulan gudihiis bixiya labo kaar oo casaan ah, waxaana uu labo roose bixiyey kulan dhex-maray kooxaha Elman iyo Gaadiidka, labada casaan ayuuna kala siiyey labada dhinac kulankaasoo ay Elman ku adkaatay 3-1.
>- Ciyaaryahan Shooli oo ka tirsan kooxda Gaadiidka ayaa noqday xiddiga qaatay kaarka ugu badan ee casaanka ah wajiga hore ee horyaalka Soomaaliya, waxaana loo taagay labo jeer kaarka guduudan.
>- Ciyaaryahan Axmed C/llaahi Cabdi (Baanuu) ayaa dhaliyey goolkiisii ugu horreeyey horyaalka kaddib saddex sanadood oo uu ka tirsanaa kooxda Muqdisho City Club.
>- Kooxda Jeenyo ayaa noqotay kooxda guuldarrada ugu badan ay soo gaartay wajiga hore horyaalka waxaana sagaal kulan oo ay ciyaartay laga adkaaday siddeed ka mid ah, iyadoo hal kulan kaliya guul gaartay waxaana guushaas ay ka qaadatay kooxda Muqdisho City oo ay uga badisay 1-0.
>- Horseed iyo Dekedda ayaa ah labada kooxood ee isku haysta hoggaanka horyaalka Soomaaliya, waxaana ay wada leeyihiin min 20-dhibcood, laakiin farqiga goolasha waxaa ku haysa Horseed oo leh 17-gool, halka Dekedda ay leedahay 11-gool.
>- Saddex kooxood ee ugu horreysa horyaalka Soomaaliya ee kala ah Horseed, Dekedda iyo Heegan ayaa la kulmay min hal guuldarro wajiga hore ee horyaalka.
>- Jeenyo ayaa noqotay kooxda goolasha ugu badan laga dhaliyey wajiga hore ee horyaalka, waxaana laga dhaliyey 25-gool, halka ay dhalisay 7-gool, taasoo ka dhigan in deyn ahaan loogu leeyahay 18-gool, waxaana ay haysataa saddex dhibcood oo qura.
>- Macallin Axmed Tahliil Cali ayaa kaddib kulamo yar oo uu hoggaamiyey kooxda Jeenyo iska casilay xilkaas, waxaana hogaanka tababarennimo ee kooxda Jeenyo la wareegay xiddigii hore ee kooxaha Elman iyo Heegan Xasan Cali Rooble Babaay.
>- Gaadiidka ayaa noqotay kooxda wajiga hore kaararka casaanka ah ee ugu badan qaadatay, waxaana la siiyey labo jeer kaarka guduudan, halka kooxaha Elman, Horseed, Midnimo, Jaziira, Dekedda iyo Heegan min hal jeer loo taagay kaarka casaanka ah.
>- Tababare Kintu Mansoor oo ay Heegan la soo saxiixatay ayaa kulamo yar isagoo hoggaaminaya kooxda isaga tagay horyaalka oo socda, dibna uguma soo laaban, waxaana kooxda haatan hoggaaminaya ciyaaryahankeedii hore ee Aayarta.
Waxaa xogtaan soo uruuriyey: C/fitaax C/rashiid Abuurka (Nani)
Waxaana qoray: Haaruun Yuusuf Khasaaro
Kooxda Juventus oo guul-darro aysan fileyn kala kulantay Kooxda SPAL + Sawirro